‘कोरोनाले चलचित्रलाई रोक्न सक्दैन’
निर्देशक नवल नेपाल
२०५० सालमा इटहरी–२० तरहराबाट सिनेमामा काम गर्न काठमाण्डौ छिरेका नवल नेपाल पछिल्लो छिमलका लोकप्रिय निर्देशक हुन । उनी कलाकार भित्रको अभिनय क्षमतालाई निचोर्न सक्ने उत्कृष्ट फिल्म निर्देशक बन्न सफल भएका छन । २०६७ सालमा फिल्म ‘श्रीमान’ निर्देशन गरे । डेब्यु निर्देशनबाटै उनले फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो उपस्थिति देखायो ।
‘महसुस’, ‘लज्जा’, ‘भाग सानी भाग’, ‘मङ्गलम्’हुँदै ‘मारुनी’सम्म आइपुग्दा नवल एक राम्रो सिनेमा मेकरको रुपमा स्थपित भैसकेका छन । २०७४ मा प्रदर्शनमा आएको ‘मंगलम्’ त विभिन्न अवार्ड कार्यक्रममा २५ विधामा मनोनयनमा पर्न सफल भयो भने दश वटा त अवार्ड नै हात पारेको थियो । कोरोनाको कारण फिल्मी क्षेत्रमा अछुतो छैन । सफल निर्देशक नेपालसँग यसै विषयलाई लिएर ब्लाष्टका लागि धनबहादुर पुरीले गरेको कुराकानी ।
कोरोनाको सन्त्रास विश्व भर छ । तपाई के गर्दे हुनुहुन्छ ?
–कोरोना महामारीबाट हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सकेन । त्यो सँगै फिल्मी क्षेत्रमा पनि कोरोनाको प्रभाव पर्यो । मैले लकडाउनका बेला घरमै दुई वटा चलचित्रको स्कृप्ट लेखेको छु । अर्को स्कृप्ट पनि लेख्ने तयारीमा छु ।
अवको चलचित्र कस्तो आउँदैछ ?
–म केही नयाँ र नयाँ कथामा चलचित्र पस्किदा दर्शकले मन पराई दिने कुरामा बिश्वस्त छु । सबैलाई मन पर्ने चलचित्र बनाउँन मेरो प्रयास हुने छ । मैले पारिवारिक कथा नै लेख्छु, र अहिलेका स्कृष्ट पनि त्यस्तै छन । मैले लेखेको कथाहरुको फिल्म हेर्दै गर्दा त्यो कथाले दर्शकको मन मस्तिष्क खिच्न सकोस भन्ने मेरो मान्यता हुन्छ ।
कोरोनाले चलचित्र क्षेत्रलाई कतिको असर पारेको छ ?
–मनोरञ्जनलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर त गरेको छ । तर चलचित्र भनेको नदी हो । यो बगीरहन्छ । यसले जुनसुकै बाटो पनि लिन सक्छ । जस्तै अहिले त विभिन्न माध्यमहरु बनेका छन । युट्युब, टेलिभिजनलगायतका वेबसाइडहरु छन । त्यसकारण चलचित्रको सौन्दर्यता र चलचित्र कहिले पनि टुंगिदैन, र विस्थापन पनि हुँदैन । कोरोनाले चलचित्रलाई रोक्न सक्दैन ।
चलचित्र क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
–अहिलेको अवस्था सबैको नाजुक नै छ, चलचित्रको मात्र होइन । हामीहरुले चित्त कहाँ बुझाउने हो भने हामीले जुन दुःख पाईरहेका छौँ त्यो भन्दा अझ धेरै दुःख पाउनेहरु पनि हुनुहुन्छ । हामी धेरै जना सिनेमामा कार्यरत त छौँ तर सबै जना यसैमा आश्रित छैनौँ । कुनै न कुनै विकल्प छ । तर हामी भन्दा असहज जीवनलाई हेरेर पनि हामीले एक अर्कामा होस्टेमा हंैसे गर्नु पर्छ।
चलचित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन चलचित्र उद्योगले कस्तो पहल गर्नु पर्ला?
–चलचित्र क्षेत्रमा जति पनि आवद्ध छन । उनीहरु सबैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन । आ–आफनो ठाउँबाट सबैले पहल पनि गरिरहेका छन । यसमा अझ बढि चलचित्र निर्माता संघहरुले चिन्तन गरिरहेको छ । निर्माता संघले जुन किसिमको पहल गरिरहेको छ त्यो हाम्रो लागि एउटा मार्गदर्शन पनि हो । चलचित्र संघ एउटा छाता संगठन भएको कारण पनि आफ्नो ठाउँबाट लागिरहेको छ ।
–कोभिड १९ बाट अवस्था सामान्य भएलगत्तै एउटा चलचित्र निर्देशन गर्ने तयारी गर्दैछु । हामी सबै मिलेर कामना गरौं यो महामारीबाट चाँडै मुक्त हुनेछौं । कोरोनाको अन्त्य भए दशै लगतै म चलचित्रको सुटिङमा निस्कने छु । अहिले स्वस्थ रहौं, सुरक्षित रहौं ।